လွန်ခဲ့ပြီးသော (၂၀၀၂) ခုနှစ်မှာ ကျွန်တော်ဆိုတဲ့ လူငယ်တစ်ဦးဟာ ငွေဆိုတဲ့ ဂုဏ်ပကာသနကို မက်မောသောကြောင့် ကုမ္မဏီတစ်ခုမှာ ကျောက်တူးဖို့ အလုပ်ဝင်လုပ်တယ်။ သို့သော် အောင်မြင်မှု မရခဲ့ပါဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ဘုရားသခင်ဟာ ဒီအလုပ်နဲ့ အားမပေးခဲ့ဘူး။ ကျွန်တော်ဟာ ကက်သလစ် လူငယ်
Read more: အချိန်မီပါသေးတယ် - သောမတ်(စ်)ခါးလီ
ကိုမေတ္တာ(သင်းအုပ်ဆရာ) ၏ "သင်းအုပ်ဆရာတစ်ယောက်၏ဖွင့်ဟ၀န်ခံချက်" စာအုပ်မှ ဆောင်းပါးများကို မုရန်တွင် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်ဟု ပေးအပ်ခဲ့ပါသည်။ ဆော့ကော်ပီလည်း ပေးခဲ့သော်လည်း ပေ့ခ်ျမိတ်ကာ၊မြန်မာဖောင့်များကို ပြန်လည်ပြောင်းရန် အခက်အခဲဖြစ်နေသောကြောင့်၊ တိုက်ရိုက်ရန်လည်းအခက်အခဲရှိသောကြောင့် ဆောင်းပါးအားလုံးကို
Read more: ကိုမေတ္တာ (သင်းအုပ်ဆရာ) နှင့် မုရန်
ကွာလာလမ်ပူ၊ KLBC အသင်းတော်ကို လာရောက်ခွန်အားပေးဖို့ဆိုတာထက် ကျွန်တော်ကိုအားပေးဖို့ပါ။ ကျွန်တော်လာတဲ့အခါ အများကြီးပဲ၊ ရုပ်ရှင်ကြည့်သလိုပဲ။ ဒါပေမဲ့ရုပ်ရှင်ကြည့်တာမဟုတ်ပါဘူး..။ ယုံကြည်သူတွေအများကြီးလာကြတယ်မဟုတ်လား။ လူငယ်တွေကိုတွေ့တဲ့အခါ အများကြီးဝမ်းသာပါတယ်။
Read more: ဘစ်ရှော့မောယာနှင့်ကွာလာလမ်ပူ၊ KLBC အသင်းတော်
တရုပ်နှစ်သစ်ကူ-စင်ကာပူယုဒသန်အသင်းတော်မှဖိတ်ခေါ်ခြင်း (7 Mountains - David Lah)
နှစ်စဉ် တရုပ်နှစ်သစ်ကူးရုံးပိတ်ရက်ဆိုရင် စင်ကာပူ၊မလေးရှားနိုင်ငံရောက် မြန်မာခရစ်ယာန်အသင်းတော်၊ မိတ်သဟာရများဟာ Family Camp, Bible Study, Retreat စသဖြင့် စုစည်းလုပ်ဆောင်ကြပါတယ်။ ဒိနှစ် စင်ကာပူမှာလည်း အီလင်းအသင်းတော်၊ ကရင်အသင်းတော်များ၊ ကချင်အသင်းတော်၊ လစ်တဲမြန်မာ၊ ဂရေ့စ်မြန်မာ၊ စီအိုအက်မြန်မာ
ပြည်ပရာက်သင်းအုပ်ဆရာ - နှစ်သစ်နှင့်ငါ့အဘအိမ်တော် (ဦးဇော်မင်း၊ Rev, Dr)
ခရစ်ယာန်အသက်တာသည် စိတ်လှုပ်ရှားစရာအလွန်ကောင်းပါသည်။ ခရစ်တော်၌ရှိလျှင်အသစ်ပြုပြင်ခြင်းသတ္တ၀ါဖြစ်သည်။ မှားယွင်းခဲ့သောအရာများရှိကောင်းရှိသော်လည်း၊ ရပ်နေရန်မဟုတ်ပဲ ခရစ်တော်ကိုကိုင်ထားခြင်းသည် အောင်မြင်ခြင်းအသက်တာဖြစ်သည်။
Read more: ပြည်ပရာက်သင်းအုပ်ဆရာ - နှစ်သစ်နှင့်ငါ့အဘအိမ်တော်...
ကျနော့် လက်ကိုင်ဖုန်းထဲကို အမည်မသိ ဖုန်းတစ်လုံးက လှမ်းခေါ်လို့ထူးလိုက်မိတဲ့အခါမှာတော့ တဖက်က မိန်းကလေး တစ်ယောက်က သူ့နာမည် အရင်းနဲ့စပြီး မိတ် ဆက်ပါတယ်။ ပြီး သူ့ရင်ထဲက ပူလောင်မှု နောင်တ တရားနဲ့ မှားမိခ့တဲ့ဲ အမှားအတွက် ဘုရား သခင်ထံ ဝန်ချတောင်းပန်ရင်း လူရှေ့ ဘုရားရှေ့မှာ ဝန်ခံဖို့ ပြောဆိုလာတဲ့အပြင်
Read more: တဏှာနဲ့ပါဝါ (၂) သခင့်စကား(အယ်ဒီတာ -...
ပျော်ရွှင်သော အိမ်ထောင်မိသားစု၊ (ကကြီးမှအ)
က - ကယ်တင်ခြင်း၊ ခရစ်တော်အလင်း
ခ - ခရစ်တော်... ဘုရားသားတော်
ဂ - ဂတိတော် ... ကိုင်ဆွဲကြ
င - ငြိမ်သက်ခြင်းအရှင် ... ယေရှုရှင်
စ - စိုးစံ .. နှလုံးသားအမှန်
ဆ - ဆယ်ဖို့တဖို့ ... ပေးကြစို့
ဇ - ဇွဲရှိစွာ - ဆုတောင်းပါ
ည - ညတိုင်း ... ၀တ်ပြုကြ
တ - တရားဒေသနာ ... ဝေငှပါ
Read more: ပျော်ရွှင်သော အိမ်ထောင်မိသားစု၊ (ကကြီးမှအ)
Read more: ဘုရားသခင်ရှာနေသောသောနှလုံးသား - ဒေဗစ်လား
ဆန်ဖရန်စစ္စက်ို - FBBC အသင်းတော်မှာ Nov 2011, ဧည့်သည်တော်အဖြစ် ဆရာမဖလော်ရင့်လီ.. တရားဒေသနာ ဟောကြားပါတယ်။ အလွန်ခက်ခဲတဲ့ ကာလများမှာ ဘုရားဘုန်းတော်ထင်ရှားစေမဲ့ အမှုတော်ဆောင်ခြင်း ဒေသနာကို ဝေငှပါတယ်။ တနည်းအားဖြင့် မစ်ရှစ်ဘယ်လိုလုပ်ခဲ့ကြသလဲ ..ဘိုးဘေးများဟာ ခက်ခဲမှုကြားက နောက်မဆုတ်ပဲ
Read more: ဧည့်သည်တော်အဖြစ် ဆရာမဖလော်ရင့်လီ.. တရားဒေသနာ -...
အသက်၃၀ကျော်အရွယ် စစ်ကိုင်းတိုင်း၊ ဆလင်းကြီးမြို့နယ်မှာ တာဝန်ထမ်းဆောင်ရင်းက ဇနီးသည်မိသားစုရှိရာ မုံရွာမြို့ကို အပြင်းဖျားပြီးရောက်လာပါတယ်။ ကျွန်တော်မိခင်၊ အသက်၃၀ကျော်ပဲရှိသော်လည်း ကလေး ၆ယောက်အမေဖြစ်တဲ့ မိခင်ဒေါ်လခန်းခါး၊ သားဖွားဆရာမခမြာ
Read more: ကျွန်တော့ဖခင်အတွက် မှတ်တမ်းလွှာ
မော်လမြိုင် ဒေါက်တာစောဝါးထူး ကွယ်လွန် – Dr. Saw Wah Htoo passes away
အောက်တိုဘာ ၂၉၊ ၂၀၁၁ နာရေးကြော်ငြာဖြတ်စမော်လမြိုင်မြို့ အနာကြီးရောဂါပြုစုစောင့်ရှောက်ရေးဆေးရုံတွင် တာဝန်ယူခဲ့သော ဒေါက်တာစောဝါးထူးသည် အင်္ဂါနေ့က ကွယ်လွန်သွားသည်။
ဆရာကြီး ကွယ်လွန်ကြောင်း နာရေးကြော်ငြာကို ယနေ့ကြေးမုံသတင်းစာတွင်
Read more: မော်လမြိုင် ဒေါက်တာစောဝါးထူး ကွယ်လွန် – Dr. Saw...
Read more: ဘုရားဆုံးမတယ်ဆိုတာ ပါးပါးလေးလား --